'I bet' challenge on the cards as King 98 releases video - ZBC NEWS
AWARD-WINNING South Africa-based Zimbabwean hip-hop artiste Ngonidzashe “King 98” Dondo has released a new song, ‘I bet’ which is accompanied by a sizzling video shot in Kariba.
The ‘Kachiri’ hitmaker has also partnered with Zimbabwe Tourism Authority to do the ‘I bet’ challenge which will see the winners of the competition going on a trip to Kariba.
King98, being an international artist, celebrated in Africa and around the globe took it upon himself to market the various tourism facets of Zimbabwe. Footing all the costs, the Kachiri hitmaker intertwines with the Vision of the Ministry of Tourism which is to produce over US$5 billion by 2025.
“The ‘I Bet’ video was shot in Kariba in a bid to showcase the beauty of Zimbabwe and the manifold tourists’ sites Zimbabwe has. In light of this, the Zimbabwean Tourism Authority (ZTA) has endorsed the video and soon enough, King98 and the (ZTA) will collaborate to run the ‘I Bet’ challenge in which winners will have a trip to Kariba,” said Steven Tsikirayi, King 98’s publicist.
Tsikirayi announced the release of the song which he described as a continuous improvement of the hip hop star’s whose vision to conquer Africa and beyond.